ကွငျနာခငျြယောငျတော့မဆောငျနဲ့ အပျေါယံတှကေို ကြှနျမ မုနျးတယျ ။ - Tameelay
ကြှနျမကို ကွငျနာခငျြမှ ကွငျနာပါ သို့သျော ကွငျနာခငျြယောငျတော့မဆောငျနဲ့ အပျေါယံတှကေို ကြှနျမ မုနျးတယျ ။
ဟနျဆောငျပွီး အခဈြခံရတာလဲ လူမှားပွီး ဓားနဲ့ထိုးခံရသလိုပဲ သတေတျတာမြိုးပဲလေ အသကျတှေ မသတေောငျ ဘဝတှေ သခေငျြ သသှေားတတျတာမြိုးပေါ့ ။
အရာရာကို စိတျနှဈကိုယျနှဈပွီး ခံစားတတျတဲ့ အားနညျးခကျြကွီးက ပွငျမရတဲ့အထဲ လှယျလှယျလေး ယုံကွညျတတျတဲ့ အကငျြ့ကွောငျ့လဲ ခကျပါတယျ ။
ကိုယျနဲ့လိုကျနှိုငျးပွီး ကိုယျ့လိုပဲလို့ ထငျတတျတဲ့ အတှေးတှေ ခုထိ မပြောကျသေးတာလဲ ပါတယျလေ ။
သနားပွီး ခဈြတာမြိုး ကြှနျမ မနှဈသကျဘူး ကြှနျမ မှာ ခွနှေဈဖကျ လကျနှဈဖကျ အကောငျးပတိအတိုငျးလဲ ရှိတယျ
ရညျမှနျးခကျြတှေ အိပျမကျတှလေဲ အပွညျ့ရှိတယျ ကြှနျမဟာ အသနားခံ လူသားမဟုတျသလို သနားစရာကောငျးတဲ့ ကောငျမလေးအဖွဈ မကျြလုံးမွငျပွီး ကွငျနာသလိုလို သနားသလိုလို အကွညျ့မြိုးတှကေို ကြှနျမ ရှံလဲ ရှံတယျ မုနျးလဲ မုနျးတယျ သနားပွီးမှ ခဈြတယျဆိုရငျ မခဈြပါနဲ့
ပွီးတော့ . . . ငါးမရ ရခြေိုးပွနျတဲ့အခဈြမြိုးတှလေဲ မနှဈမွို့ဘူး ကိုယျတဈဦးတညျးအတှကျ ဖွဈတညျလာတဲ့အရာမှ မဟုတျရငျ ဘယျအရာကိုမှ မတပျမကျဘူး ။
ကြှနျမ ကိုယျနှဈသကျတဲ့အရာတှေ ကိုယျစှဲလမျးတဲ့အရာတှတေောငျ တဈဖကျနဲ့ ပွိုငျပွီးလုရတာမြိုးဆိုရငျ ကြှနျမ မလိုခငျြလာတော့ဘူး ။
ကြှနျမ အတှကျသီးသနျ့ဖွဈတညျတဲ့အခဈြတှကေိုပဲ တပျမကျပါတယျ ။
ကြှနျမကို ကွငျနာခငျြမှ ကွငျနာပါ ခဈြခငျြမှလဲ ခဈြပါ ခဈြတာ မခဈြတာက တကယျတော့ အပွဈမဟုတျပါဘူး
ဒါပမေယျ့ ခဈြခငျြယောငျဆောငျတာကြ တဈဖကျသားအပျေါ မညှာတာတဲ့ ကွီးလေး အပွဈမြိုးပါ
ကြှနျမ ခှငျ့မလှတျဘူး အပျေါယံသကျသကျဆို ကြှနျမ မနှဈမွို့ဘူး ။
အတငျးအကွပျကွီးလုပျယူပွီးမှ ကိုယျ့ဖကျက သညျးသညျးလှုပျ ခဈြကွခဲ့ပွီးနှ ဖွဈတညျလာတဲ့အခဈြမြိုးတှေ ကြှနျမ မလိုခငျြဘူး သူ့အလိုလို ဖွဈတညျလာတဲ့ အခဈြမြိုးတှပေဲ ကြှနျမ လိုခငျြပါတယျ ။
ကျွန်မကို ကြင်နာချင်မှ ကြင်နာပါ သို့သော် ကြင်နာချင်ယောင်တော့မဆောင်နဲ့ အပေါ်ယံတွေကို ကျွန်မ မုန်းတယ် ။
ဟန်ဆောင်ပြီး အချစ်ခံရတာလဲ လူမှားပြီး ဓားနဲ့ထိုးခံရသလိုပဲ သေတတ်တာမျိုးပဲလေ အသက်တွေ မသေတောင် ဘ၀တွေ သေချင် သေသွားတတ်တာမျိုးပေါ့ ။
အရာရာကို စိတ်နှစ်ကိုယ်နှစ်ပြီး ခံစားတတ်တဲ့ အားနည်းချက်ကြီးက ပြင်မရတဲ့အထဲ လွယ်လွယ်လေး ယုံကြည်တတ်တဲ့ အကျင့်ကြောင့်လဲ ခက်ပါတယ် ။
ကိုယ်နဲ့လိုက်နှိုင်းပြီး ကိုယ့်လိုပဲလို့ ထင်တတ်တဲ့ အတွေးတွေ ခုထိ မပျောက်သေးတာလဲ ပါတယ်လေ ။
သနားပြီး ချစ်တာမျိုး ကျွန်မ မနှစ်သက်ဘူး ကျွန်မ မှာ ခြေနှစ်ဖက် လက်နှစ်ဖက် အကောင်းပတိအတိုင်းလဲ ရှိတယ်
ရည်မှန်းချက်တွေ အိပ်မက်တွေလဲ အပြည့်ရှိတယ် ကျွန်မဟာ အသနားခံ လူသားမဟုတ်သလို သနားစရာကောင်းတဲ့ ကောင်မလေးအဖြစ် မျက်လုံးမြင်ပြီး ကြင်နာသလိုလို သနားသလိုလို အကြည့်မျိုးတွေကို ကျွန်မ ရွံလဲ ရွံတယ် မုန်းလဲ မုန်းတယ် သနားပြီးမှ ချစ်တယ်ဆိုရင် မချစ်ပါနဲ့
ပြီးတော့ . . . ငါးမရ ရေချိုးပြန်တဲ့အချစ်မျိုးတွေလဲ မနှစ်မြို့ဘူး ကိုယ်တစ်ဦးတည်းအတွက် ဖြစ်တည်လာတဲ့အရာမှ မဟုတ်ရင် ဘယ်အရာကိုမှ မတပ်မက်ဘူး ။
ကျွန်မ ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့အရာတွေ ကိုယ်စွဲလမ်းတဲ့အရာတွေတောင် တစ်ဖက်နဲ့ ပြိုင်ပြီးလုရတာမျိုးဆိုရင် ကျွန်မ မလိုချင်လာတော့ဘူး ။
ကျွန်မ အတွက်သီးသန့်ဖြစ်တည်တဲ့အချစ်တွေကိုပဲ တပ်မက်ပါတယ် ။
ကျွန်မကို ကြင်နာချင်မှ ကြင်နာပါ ချစ်ချင်မှလဲ ချစ်ပါ ချစ်တာ မချစ်တာက တကယ်တော့ အပြစ်မဟုတ်ပါဘူး
ဒါပေမယ့် ချစ်ချင်ယောင်ဆောင်တာကျ တစ်ဖက်သားအပေါ် မညှာတာတဲ့ ကြီးလေး အပြစ်မျိုးပါ
ကျွန်မ ခွင့်မလွှတ်ဘူး အပေါ်ယံသက်သက်ဆို ကျွန်မ မနှစ်မြို့ဘူး ။
အတင်းအကြပ်ကြီးလုပ်ယူပြီးမှ ကိုယ့်ဖက်က သည်းသည်းလှုပ် ချစ်ကြခဲ့ပြီးနှ ဖြစ်တည်လာတဲ့အချစ်မျိုးတွေ ကျွန်မ မလိုချင်ဘူး သူ့အလိုလို ဖြစ်တည်လာတဲ့ အချစ်မျိုးတွေပဲ ကျွန်မ လိုချင်ပါတယ် ။